Maqaa koronaan ummata hidhaatti guuruun wantuma hin fakkaanne. Kana sababuma biroo itti barbaada. – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsMaqaa koronaan ummata hidhaatti guuruun wantuma hin fakkaanne. Kana sababuma biroo itti barbaada.
Maqaa koronaan ummata hidhaatti guuruun wantuma hin fakkaanne.
Kana sababuma biroo itti barbaada.
(By Dr Jemal Markos)
Koronaan walqabatee, maqaa olaantummaa seeraan oromiyaatti namni 1,600 hidhamani jedhutti jiru. Hangana yoo amanan, lakkoofsi namoota hidhamanii dachaa meeqa akka tahu tilmaamuun nama hin dhibu.
1. Naannoo birootti namoonni hidhamanii jiruu? Yoo jiratan nama meeqatu hidhame?
2. Gochoota yeroo labsii muddama dhowwaa jedhamanii labsaman keessaa isa kamtu nama adabsiisa wanti beekamu jiraa? Ummataaf ibsamee jiraa?
3. Adabbiin gochoota dhoowwaa tahan kanaaf kennamu maal fa’a? Ummatni beekaa?
4. Ofi eegannoo ummatni akka godhuuf hojiiwwan mootummaan qabatamaan dalagaa jiru hangam quubsaadha? Ummatni kun hundi seeraa maaliif cabse laata? Ofi miidhuuf moo walaalummaa irraayyi? Moo ilaalchi ummatni dhibee kanaf kennuutti jiru sirrii miti? Yoo sirri hin taanee, maaliif?
5. Koronaa ittisuuf wantoota murteessaa tahan keessaa gargar fagaachuu fi mana turuun isaan jalqabatti. Garuu ummata kana hunda hidhaatti guuruun koronaaf saaxiluu hin tahuu?
6. Ummata kana hunda hidhatti guuranii dhibeef saaxiluu irra, barsiisuun gad lakkisuun hin danda’amuu?
7. Gochawwan hoggantoonni mootummaa guyyaa guyyaan raawataa oolan labsii yeroo muddama kana kan kabajuu?
Muuxannoo biyyoota hedduu akka dubbisetti, koronaa to’aachuuf seerota ba’aan hojitti hiikuun baay’ee murteessadha.
1. Seeronni kun nama hundaaf wal qixa dalaguu qaba. Naannoo hundatti qixa tahuu qaba.
2. Seeronni kun hojiirra oolchuuf rakkisaa tahuu hin qaban.
3. Barnootni gahaan ergaa kennamee boodaa hojitti hiikuu qabna. Waan akka mootummaan dirqamaan itti labseeti amanuu hin qabu.
4. Ummatni Seeronni kun nu fayyada jedhee amanuu qaba. Hojiirra oolchuuf illee mootummaa waliin dalaguu danda’uu qaba.
5. Adabbii darbu immoo namni hunduu qixa tokkoon beekuu qabu.
6. Seerota kana hojiitti yeroo hiiknu galmii isaa guddaan adabbii osoo hin taanee barnoota kennu qofa tahuu qaba.
7. Seeronni kun hojittii hiikamuun faayidaa argamu caalaa miidhaan inni fidu caaluu hin qabu.
Abdo Qaadi Abajabal
#Taye_Dendea_Aredo and their accomplices.
Durriyyeen boru hin beektu isuma harkaa qabdu fixxee bira kutti borus waanuma har’a argattuuf karaa gubbaa joorti saamtee nyaattee bulti durriyyeen galma hin qabdu durriiyyeen kaan ajjeeftee ofii nyaachuun alatti hamma feete deesseen isaas yoo manatti beelaan dhibeen rakkatte garagaltee hin ilaaltu inumaayyuu rakkoo san dhageettee furuu mannaa mana sanatti galuu dhabee rakkoo san dhagahuu dhabuu filata
Jarreen asii gaditti argitan kun duurriyyoota boyya hoogganna jedhanii biyya saamaa jiraniidha #koronaan da’atanii siyaasa isaanii gaggeeffataniidha ummata isaaniin mormu hooggantoota dhaabbilee mormituu labsii yeroo hatattamaa cabsite jechuun namoota kumoota hedduu erga hidhatti guuranii booda ofii isaaniitii akka barbaadanitti nama hamma narbaadaniin wal ga’anii akkanatti waan ofii yaadan dalagutti jiru kun gamtaa duurriyyee jedhama
Wal siqaa jedhu ofii qalitti maxxanu. Manaa hin ba’inaa jedhu ofii isaaniitii ooyruu qotee bulaa keessa yaa’u. Wal gahii hin taa’inaa jedhu ofii isaaniitii finfinneetti leenji’aa naannolee Godinaaleef aanaalee naannayanii akka fedhanitti wal gahii gaggeessu
Konkolaataa bajaajii irratti seera dabaa baasanii ummata saamu ofii isaaniitii konkolaataa takkattii nama shaniin yaabbatanii miseensoota nagaya eessisan konkolaataa tokkotti nama kudhanii ol fe’anii jooru
Gamtaan biiraa qicatu
Gamtaan cooma muratu
Gamtaan caatii ciratu
Gamtaan siyaasa dabaa ummata irratti dalagutti jiru
Kun gamtaa duurriiyyee jedhama kan seera ofii baase ofii cabsu.
“Hootela HAWII Beektu Mitii?
“Qaama seena Oromooti mitii ree? Osooma xiqqeessinee fudhanne Oromoon Miiliyoona 40 ol mitii? Kana keessaa Miiliyoonni 10 qarshii 10 gumaachuu ni danda’a mitii ree?
Qarshiin 10 gatii lallaafaa tokko ittiin dhugaanii fincaa’an mitii ree?
Namoonni miiliyoonni 10 osoo qarshii kudhan kudhan buufatan meeqa ta’a?
Miiliyoona 100 mitii? Kanaan seena cimaa tokko hojjechuun ni danda’ama mitii ree?
Qarshii kanaan Hootela Hawwii bakka bareeda qabu sana irratti Gamoo bareedaa ijaaruu ni dandeenya mitii ree?
Yoo abbaan Hootela Hawwii tole jedhe immoo naamoota qabsoo Oromoo keessatti qaama hir’ataniif kutaa muraasa yoo qoodan madaa meeqa fayyisuun ni danda’ama miti ree.
Gamtaan haa dhaabbanu .Madaa haa fayyisnu. Baayyinni Oromoo akka dhimma baasu haa agarsiisnu. Qabsoon kallattii tokko qofaan miti. Qabsoon kallattii hundaan ta’uu qaba
Qabsoon waan baayyee of keessa qaba. Diinnii jabina Oromoo karaa kana haa argitu
Abbaan Hootela Hawwii qabsoo Oromoof jedhanii waan hunda dhaban
Jireenya isaanii dhaban
Fayyaa isaanii dhaban. Ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaa seena himanii nu yaadachiisan
Miidiyaaleen Oromoo waa’ee Hootela Hawwii irratti cimsanii hojjechuu qabu
Hayyoonni Oromoos. Aktivistoonni Oromoos. Dhimmi kun dhiima seenaati
Dhimmi kun Dhimma of kabachiisuuti. Dhimma faayidaa GAMTAA agarsiisuuti
Yoo walii ofii kabajan diinni nama kabajdii. Yoo wal gatan diinni nama tuffatti!
#Hootelli_HAWII_qaama_seena Oromooti mata duree jedhuun sochii taasisuu qabna.”
“Gocha wayyaanee bara 27 oromoorra geessiste caalaa kan Abiy Ahamad waggaa 2tti cubbuu hamaa ilmaan oromoorra geessisetu caala.
“Abiy reeffa oromoo ajjeesisee awwaalcha dhoorkate, daa’ima kichuurraa miila mure, ilma oromoo ajjeesuun qaama isaa cicciranii waraabessaaf laatan, obboleewwan dhiiraa mana hedduurraa ajjeesise.ilmaa fi abbaa ajjeesee boolla tokkotti galchisiise.qabeenya oromiyaa yeroo wayyaanee nafxenyaan sodaachaa ture amma abiy oromiyaa nafxenyaaf dabarsee laateera.
“Uummatni Amboo paastaa har’a nyaatanii boru kajeelan osoo hin taane, warshaa ijoolleen keenya irratti gurmooftee paastaa oomishitu barbaada. Walumaa galatti wal gowomsuun haa dhaabbatu oromoon garaa isaaf hin qabsoofne, Osoo Qamadii oomishuu beela’aa jira uummatni keenya. Kunimmoo kan ta’e barabaraan mootummaa sobduuniifi hattuun itti jijijjiiramuu isaatiin. Obbo Taakkalaanis nu dhiisaa, yoo dhuguma Oromoof yaaddan, warshaa paastaa 1 dhaabsisaa. Uummata harka qalleeyyii gargaaruun aaduma keenya garuu siyaasaaf jecha fakkeessuun qaaniidha. Faranjiin nama beela’eef qurxummii hin kenniin akka itti qurxummii qabatu barsiisi malee jetti. Dhugaa dubbachuuf Oromoof paastaa kennuun tuffiidha keessattuu warra naannoo baddaa fi baddaa daree jiraataniif warra bonaaf ganna rooba argataniif. Kanaafuu fakkeessuun haa hafu….”
Mootummaan kun vaayrasiin kana ummata keenya waliin gahuuf mudhii hidhatee dalagaa waan jiru fakkaata.
Qorannoon hedduu akka ibsutti, dhibee kana irra aanuuf ummata hirmaachisu fi waliin dalaguun dirqama. Ummata barsiisuu fi gargaruun hafee, shororkeessuu, mana hidhaatti guuruu fi ajjeesuun cimee yoo itti fufu argutti jira. Ummatni #Koronaan hamaan qabatamaan hudhee qabee osoo jiru, sammuu kamiin dhimma dhibee koronaa yaada.
Ummatni ofi eegachaa hin jiru jedhaa farrajuun homaa madaala naaf hin kaasu.